Saxaraha Saxaraha: Mucjisooyinka Dabiiciga ah iyo Hieroglyphs dahsoon | Safarka Absolut
Saxaraha Saxaraha waa dhul ballaadhan oo ballaadhan oo ka soo fula Badda Cas ilaa inta Badweynta Atlaantik, degitaanka ku dhowaad sagaal milyan iyo badh kilomitir oo laba jibbaaran. Wuxuu daboolayaa wadar ahaan toban wadan ka mid ah kuwa Masar, Libya, Chad, Algeria, Morocco, Tunisia iyo Mauritania.
Kordhintaas, waa inaysan layaab ku noqon inay tahay lamadegaanka ugu kulul dunida iyo inay koobeyso waxyaalo kala duwan, oo mid kastaaba leeyahay astaamo u gaar ah. Sidaa darteed, iyagu waxba kuma laha steppe iyo dhirta dhirta leh ee saxaaraha koonfureed la socota buurta xerophilous ee massibbada Tibesti. Iyo sidoo kale midkoodna labadii hore oo leh Tanezrouft, mid ka mid ah meelaha ugu daran ee Dunida. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato saxaraha weyn ee Saxaraha, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nagala soo qaybgasho safarkayaga.
1 Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa saxaraha Saxaraha
1.1 Manhajka Ennedi
1.2 Ahaggar massif
1.3 Dooxada Mzab
1.4 Nouadhibou, oo ah qabuuro markab oo ku yaal lama degaanka Saxaraha
1.6 Erg Chebbi, oo ah bad dunes
1.8 Fezzan, oo ah qaybta Liibiya ee saxaraha Saxaraha
1.9 Mount Uweinat, hieroglyphs qarsoodi ah
2 Goorma ayey fiicantahay in la aado saxaraha saxaraha
3 Sidee loo tagaa Saxaraha
Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa saxaraha Saxaraha
Waxaa jira aagag badan oo lamadegaanka Saxaraha ah oo aanan xitaa kaala hadli doonin. Sababta waa mid aad u fudud: iyagu waa meelo sidaas ah aan macquul ahayn in kaliya khabiiro aqoonyahano dhab ah oo sifiican u og sirta dhulalkaas ay u safraan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira goobo kale oo aan booqan karno dalxiisyo abaabulan iyo inay quruxdooda nagu fajicinayaan. Waan baran doonaa qaar ka mid ah.
Meeshan cajiibka ahi waxay ku taal waqooyi-bari ee Chad waxaana loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu fog dhulkeena. Waxay ku wareegsan tahay cammuudda dhinacyada oo dhan, waxay u taagan tahay dooxooyinkeeda wanaagsan iyo bannaanka.
Dhaxalka aduunka, dabeecadda ayaa ku samaysantay Ennedi qaansooyinka waaweyn iyo tiirarka. Waxaa ka mid ah kuwa ugu horreeya ee taagan Aloba, oo gaaraya 120 mitir oo dherer ah iyo 77 balac ah. Iyo si la mid ah xiisaha leh waa Shan Arches, taas oo, sida magaceeda ka muuqata, ay u samayso nooc ka mid ah gantaal guul ah oo leh shan furitaan, iyo Maroodi maroodiga, oo u eg jirridda pachyderm iyo xitaa isha qaybteeda sare.
Sida in waxaas oo dhammi aysan ku filnayn, meeshan aan laga faa'iideysan karin ee ay heleen rinjiyeyn taasi oo muujineysa in la deganaa xilligii Holocene (Millennium afraad BC). Gaar ahaan caan waa kuwa aagga of Niola doa, oo matalaya dumarka ilaa laba mitir dherer ah.
Massif ee Ahaggar
Waxaan hada u dhaqaaqeynaa dhanka koonfureed ee Algeria si aad u booqato mid kale oo ka mid ah meelaha ugu caansan Saxaraha. Waa massifta buuraha ah ee Ahaggar ama Hoggaar. In kasta oo ay dherer yihiin, haddana cimilada aaggan waa ka yar tahay meelaha kale ee lamadegaanka ku yaal, waana sababta ay u soo booqdaan dalxiisayaal badan.
Waqti ka dib, nabaad guurka wuxuu siiyay buurahan qaabab xarago leh oo dhulku siinayo a muuqaal qarsoodi ah. Haddii intaas oo dhan aan ku darno inay tahay dhulkii imuhagh, mid ka mid ah magaalooyinka tuugo ee degen Saxaraha, waxaan ku dhammeyn doonnaa meeshan sixir.
Magaalada ugu muhiimsan aaggan, ee dalxiisyada dalxiisyaashu ka baxaan waa Tamanrasset. Haddii aad rabto inaad ogaato magaalo laga dhisay hareeraha hareeraha, waa halkaad u socoto. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay matxaf yar oo taariikhi ah iyo mid kale oo geology ah. Laakiin way ka caansan tahay maxaa yeelay Faransiis ayaa lagu dhex aasaasay Charles de Foucauld, sahamin iyo suugaanta wicitaanka "Ruuxi ahaanta lamadegaanka".
Kama tagin Aljeeriya si aan ula kulano mid kale oo ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah ee Saxaraha: dooxada Mzab, ayaa lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka. Waa dhul dhagax leh oo ka soo tallaabay dooxada ay deggan yihiin webiga isku magaca ah.
Waxaa degan gabdhaha, oo ah qowmiyad Berber ah oo loo qaybiyay magaalooyin yar yar oo derbiyo leh, mid walbana laga dhisay mid ka mid ah buuraha deegaanka. Meelahaas waxaa ka mid ah Beni Isguen, oo masaajidkiisu ka soo bilaabmay qarnigii laba iyo tobnaad; Melika, Bounoura o Ateuf. Laakiin tan ugu muhiimsan ayaa ah Ghardaia, magac sidoo kale loo bixiyo dhammaan dhismaha, oo leh jidadkiisa cidhiidhiga ah iyo guryaha yar yar ee adobe.
Nouadhibou, oo ah qabuuro markab oo ku yaal lama degaanka Saxaraha
In kasta oo aysan si gaar ah u soo jiidanayn, haddana waxaan magaalada Nouadhibou u keenaynaa sadarradan maxaa yeelay waxay hoy u tahay qabuuro markab oo dhan, waana wax lala yaabo cidlada. Si kastaba ha noqotee, waxay ku taal xeebta Badweynta Atlantik ee Mauritania, oo ah halka Saxaraha ay kula kulanto badda.
Waxay ku dhex dhacday xiisad dhaqaale oo aad u weyn, dowladda dalkaas waxay u ogolaatay maraakiibta adduunka oo dhan in looga tago xeebaheeda. Natiijadu waxay tahay in halkaa aad ku arki karto ilaa seddex boqol oo hoos u dhac ku yimid waqtiga isla markaana abuuraya a runtii muuqaal cirfiid ah.
Este ksar o magaalada deyran Marooko waxay caan ka noqotay adduunka oo dhan noocyada kala duwan ee qorraxdu ka muuqato aqallada ay deggan tahay. Waxaad ka heli doontaa dhawr saacadood oo baabuur wadid markii laga bilaabo Marrakech waddo duug ah oo ay sameeyeen gawaarida geela.
Taasi waa quruxda Ait Ben Haddou oo lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka waxayna u adeegtay sidii goob loogu talagalay dad badan filimada sida 'Lawrence of Arabia', 'Jewel of Nile' ama 'Alexander the Great' iyo taxanaha telefishanka sida 'Game of Thrones'.
Erg Chebbi, oo ah bad dunes
Sidoo kale ku yaal Morocco, baddaan gododku wuxuu fadhiyaa qiyaastii boqol iyo toban kiiloomitir oo laba jibbaaran runtiina runtii waa mid cajiiba. Waxyaabaha soo jiidashada leh ee ugu caansan aagga waxaa ka mid ah in la raaco awr iyo in lagu seexdo jaamas dhab ah.
Jidadkani waxay ka baxaan magaalada Merzouga, taas oo haddaba si fiican ugu habboon dalxiiska dhowr hudheelo. Dhexdeeda waxaad sidoo kale ka arki kartaa Isku soo baxa Merzouga, taas oo qayb ka ah wareegga taxanaha Dakar. Oo xitaa waxay leedahay kali leyenda ku saabsan dunes ay. Waxay sheegaysaa inay ku dhasheen cadho rabbaani ah markii dadka degan Merzouga ay diideen inay caawiyaan hooyo iyo caruurteeda. Ilaahnimadu waxay markaa toosisay duufaan aad u xun oo iyaga abuuray. Dadka ku nool aagga ilaa maanta waxay rumaysan yihiin inay maqlayaan qaylo ka imaanaysa godadkaas.
Adigoon baxayn Morocco, booqasho kale oo laga galo albaabka laga galo Saxaraha waa Ouarzazate ama Uarzazat, sida loo yaqaan «Albaabka lamadegaanka». Waxay ku taalaa cagtiisa buuraha atlas oo ku xigta waxa loogu yeero Koonfurta Oasis.
Si sax ah Atlas waxaa loogu yeeraa barashada filimada Maxaa ka jira magaalada. Haddii aan horey kaagala hadalnay Ait Ben Haddou oo ah goobta lagu diyaarinayo aflaam kala duwan, tan waxaa inta badan sabab u ahaa jiritaanka aaladahaan, oo ku fadhiya qiyaastii labaatan hektar oo ay ka dhigtay Urzazat caasimada filimka Morocco.
Kashba ee Taourirt ee Ouarzazate
Laakiin magaalada wax badan ayaa kuu soo bandhigi kara. Bilowga, si qurux badan oo sifiican loo xafiday daarta Taourit. Waa a kasba ama qalcad asal ahaan reer Berber ah oo ku taal bartamaha magaalada iyo in, waqtigeeda, ay deganayd Pasha of Marrakech. Had iyo jeer waxaa lala barbar dhigaa qalcad aad u ballaaran oo xeebta taal. Waana sawir sax ah sababta oo ah gidaarradeeda adobe iyo daaraheeda waaweyn ee ku yaal badhtanka hareeraha lamadegaanka ayaa siinaya dhinacaas.
Fezzan, oo ah qaybta Liibiya ee saxaraha Saxaraha
Aagga Fezzan ayaa laga yaabaa inuu yahay qaybta ugu xiisaha badan ee Saxaraha Liibiya. Waa meel ballaadhan oo lamadegaanka lagu daro buuro iyo dooxooyin qalalan, laakiin, wixii ka sarreeya, halkaas oo masaafo kasta oo cayiman ay u muuqato oasis u oggolaanaya nolosha dadyowga ku xeeran.
Aaggan Saxaraha ah wuxuu ku siinayaa muuqaallo aad u qurux badan sida godka folkaanaha Waw-an-Namus, cabiradooda xaqiiqda ah inay ku yaalliin dhul oasis ah iyo saddex haro oo macmal ah ayaa fikrad kaa siin doona. Sidoo kale badda ciidda ee Murzuq, oo leh doobabkeeda soo rogaya; kuwa gaarka ah Buuraha Akakus, oo leh qaababka hawadooda, ama geedaha timirta ah iyo cawsduurku oo ku yaal cirifka meerisyada cusbada leh Ummu-al-Maa, vestige kii hore balliga weyn ee megafezzan kaas oo u weynaa sidii England.
Dhinaca kale, magaalada ugu muhiimsan aaggan waa Sabha, oo ah magaalo oasis ah oo ay ku noolyihiin boqol kun oo qof halkaas oo uu ku koray Muxad el Al-Qadaafi, hoggaamiyihii hore ee Liibiya. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo yar yar sida Ghat, Murzuq o Gadhamis.
Mount Uweinat, hieroglyphs qarsoodi ah
Mashiinka 'Uweinat massif' ayaa loo qaybiyaa inta udhaxeysa Masar, Liibiya lafteeda iyo Suudaan. Waxay ku hareeraysan tahay lamadegaanka Saxaraha, laakiin sidoo kale waxay leedahay oases bacrin ah sida kuwa Bahariya o Farafra. Aaggu waa soojiidasho xoog leh oo loogu talagalay dadka socda ee jecel xiisaha.
Kaamka El Fezzan
Laakiin, wixii ka sarreeya, way taagan tahay maxaa yeelay bannaanka Gilf kebir xardho ayaa laga helay dhagaxyada iyo hieroglyphs aad u da 'weyn oo matalaya dhammaan noocyada xoolaha. Waxaa helay sahamiyaha reer Masar Axmed Xasaneyn Pasha sanadkii 1923. Midkani wuxuu soo safray afartan kilomitir oo aagaas ah, laakiin ma imaan karin ilaa dhamaadka markaa waxaa macquul ah inay jiraan wax intaa ka badan
Ugu dambeyntii, aaggan waa mid cajiib ah Godka Kebira, taas oo ahayd natiijada saamaynta meteorite-ka ee dhacday qiyaastii konton milyan oo sano ka hor waxayna ku fadhidaa dhul ballaadhan oo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir oo laba jibbaaran.
Goorma ayey fiicantahay in la aado saxaraha saxaraha
Sidaad u maleyn karto, Saxaaraha ayaa leh mid ka mid ah cimilada ugu xun adduunka. Waa run oo dhul baaxad weyn leh ayaa leh, xoog, si loo soo bandhigo cimilo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, ku dhowaad dhammaan maqnaanshaha roobka iyo kuleylka daran, oo si fudud ku gaari kara konton iyo shan darajo Celsius, waa wax wada wadaaga dhammaantood.
Xaqiiqdii, xilliyada guga iyo xagaaga dalxiisyada dalxiis ee kaliya waxay dhacaan qorrax dhaca. Sidaa darteed, waqtiyada ugu wanaagsan ee loo safro Saxaraha waa dayrta iyo jiilaalka, si gaar ah gaar ahaan bilaha u dhexeeya Nofeembar ilaa Febraayo.
Iyo, dalxiisyada, waa inaad had iyo jeer doorataa abaabulay. Ma soo geli kartid xayndaabkan ciidda la'aanteed a hage aqoon leh maxaa yeelay noloshaadu waxay ku sugnaan laheyd khatar daran.
Aag ka mid ah lamadegaanka Saxaraha
Sidee loo tagaa Saxaraha
Kuma talin karno hal waddo oo aan ku aadno lama-degaankan weyn. Sababta ayaa ah inaad uga dhawaan karto wadamo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxa caadiga ah waa taas waxaad u duulaysaa magaalo ku dhow ka dibna kireysto, sidaan dhahnay, qaar booqasho abaabulan.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad booqato Saxaraha Marooko, waxaad u duuli kartaa magaalooyinka sida Marrakech iyo, mar uun, fiiri safarro dalxiis. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hay'ado takhasus leh oo horeyba kuu soo bandhigay xirmada safarka oo dhan intaadan bixin.
Gabagabadii, Saxaraha Saxaraha waa adduunka ugu weyn ka mid ah diiran. Waxay daboolaysaa dhowr waddan waxayna ku siineysaa waxyaabo yaab leh oo dabiici ah, magaalooyin riyo ah oo ku yaal cagaha hoostiisa iyo xardho dahsoon oo ku jira dhagaxyadeeda oo ku soo laabtay ceeryaamo waqtiga. Miyaad ku dhiirraysaa inaad ogaato dunidan weyn ee dhulkeenna?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Saxaraha Saxaraha